HDPE ipayipi extrusion umugqa Kusetshenziswa ikakhulukazi extruding thermoplastics, njenge PE, PP, PS, PVC, ABS, PC, PET nezinye izinto zepulasitiki. Ngemishini efanelekile esezansi (kufaka phakathi i-moud), ...
Imininingwane Yomkhiqizo Incazelo: PVC Conical Twin Screw Extruder Screw Ia: 80/156 Max.speed: 37 Okukhiphayo: 250-380kg / h Main Motor: 55kw Centtre Height: 1050 SJSZ series conical ...
Okuningiliziwe Kwencazelo Yomkhiqizo Isicelo: Khiqiza Udonga Olukodwa Amapayipi Lukathayela Izinto Ezingajwayelekile: I-PP, i-PE, i-PA ne-PVC Granules Extruder Uhlobo: Isikulufa Esisodwa Isishubhu sepayipi: 4mm ~ 100 ...
Umugqa wephrofayili ye-PVC extrusion
Umugqa we-HDPE pipe extrusion Lo mugqa usetshenziswa kakhulu ukukhiqiza amaphrofayli ahlukahlukene e-PVC, njengefasitela le-PVC & iphrofayli lomnyango, iphaneli le-PVC ophahleni, i-PVC trunking. Inqubo yokugeleza kwalo mugqa yi-PVC ...
Imodeli yokuchazwa yomkhiqizo eningiliziwe FGE63 FGE110 FGE-250 FGE315 FGE630 FGE800 ipayipi ububanzi 20-63mm 20-110mm 75-250mm 110-315mm 315-630mm 500-800mm imodeli extruder SJ65 SJ75 SJ90 SJ ...
Umugqa we-PP-R / PE-RT wepayipi we-extrusion Kusetshenziswa ngokuyinhloko ukukhiqiza i-PP-R, amapayipi we-PE anobubanzi kusuka ku-16mm ~ 160mm, amapayipi we-PE-RT anobubanzi obuvela ku-16 ~ 32mm. Ifakwe imishini efanelekile esezansi, inga ...
Umugqa we-HDPE pipe extrusion Usetshenziswa kakhulu ekukhiqizeni amapayipi wokuhambisa amanzi we-HDPE, amapayipi wokuhambisa igesi. Kungenza amapayipi e-HDPE ngobubanzi kusuka ku-16mm kuye ku-800mm. Iminyaka eminingi plastic imishini deve ...
Umshini wepayipi le-PPR Usetshenziselwa ukukhiqiza i-PP-R, amapayipi we-PE anobubanzi obuvela ku-16mm ~ 160mm, amapayipi we-PE-RT anobubanzi obuvela ku-16 ~ 32mm. Ifakwe imishini efanelekile esezansi, ingahamba futhi ...
Uchungechunge lwe-FG umshini wokushaya amabhodlela we-FG uchungechunge imishini yokushaya ibhodlela le-PET ligcwalisa izikhala emkhakheni womshini wokushaya wasekhaya ohamba ngesivinini esikhulu. Okwamanje, China eqondile olulodwa-isikhunta isivinini namanje sta ...
Imininingwane Yomkhiqizo Ochaziwe Voltage: 380V, 3 Phase, 50Hz Isisindo: 1200kg Rotating Blades: 18pcs Company: Faygo Power (W): 18.5kw Dimension (L * W * H): 1500 * 1800 * 2000 Speed ​​Rotating: 500rpm / m Model. ..
Umugqa we-HDPE pipe extrusion Lo mugqa usetshenziselwa kakhulu ukwenza ama-granules kusuka kudoti wepulasitiki, njenge-PP, PE, PS, ABS, PA flakes, PP / PE films scraps. Okokusebenza okwehlukile, lo mugqa ...
Isingeniso somkhiqizo Isitayela sokuzisika se-Faygo esizenzakalelayo sibuyekeza isisombululo sale mboni, sinciphisa kakhulu izindleko zefektri kwezabasebenzi, impahla kanye nesilinganiso esifanelekayo. Ahlabayo yethu adopt ...